EPON OLT ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | China EPON OLT စက်ရုံ
ZJ5610-EL စီးရီး EPON OLT
ZJ5610-EL သည်မြင့်မားသောပေါင်းစည်းမှုနှင့်အလတ်စားစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောကက်ဆက် EPON OLT သည်အော်ပရေတာများ၏ ၀ င်ခွင့်နှင့်စီးပွားရေးကျောင်းဝင်းကွန်ယက်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် IEEE802.3 ah နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီပြီး EPD OLT ၏လိုအပ်ချက်များနှင့် YD / T 1945-2006 ဆက်သွယ်မှုကွန်ယက်အတွက်နည်းပညာလိုအပ်ချက်များ - Ethernet Passive Optical Network (EPON) နှင့် China Telecom EPON နည်းပညာလိုအပ်ချက်များ 3.0 ကိုအခြေခံသည်။ ZJ5610-EL စီးရီးများသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ကြီးမားသောစွမ်းရည်၊ မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊
နိဒါန်း ၁။ သယ်ဆောင်သည့်အဆင့်မြင့်သောသိပ်သည်းဆထိန်သိမ်းအမျိုးအစား PON OLT ပစ္စည်းကိရိယာများ ၂။ 1G-EPON၊ 10G-EPON နှင့် GPON ၏ယူနီဖောင်းပလက်ဖောင်း ၃ ။ .ON optical link ကာကွယ်ခြင်း၊ အဓိက control board များ redundancy protection၊ power module မ်ား redundancy protection ။ ဝိသေသလက္ခဏာများ ၁။ စံ - EPON နှင့်ကိုက်ညီသည် IEEE802.3-2008 Standard၊ GPON နှင့်တွေ့ဆုံရန် ITU-T G.984 စံသတ်မှတ်ချက်။ 2. အကြီးစားစွမ်းရည်: 160 1G-EPON ဆိပ်ကမ်းများသို့မဟုတ် 80 10G-EPON ဆိပ်ကမ်းများသို့မဟုတ် 160 GPON ဆိပ်ကမ်းများ။ ၃။ Multi-ports: GE Comb ...
အပြင်ဘက် EPON OLT ZC6000
နိဒါန်း ၁။ Carrier တန်းပြင်ပ EPON OLT ပစ္စည်းကိရိယာများ ၂။ Optional 1550nm EDFA pluggable module ၃။ PON ဆိပ်ကမ်းများ ၄။ စက်မှုအဆင့်ဒီဇိုင်း၊ အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားသည့်သေတ္တာ Al Al shell ၅ ။ 2008 စံ။ ၂။ ၀ န်ဆောင်မှုမျက်နှာပြင် - ကွန်ယက်ဘက် - GE GE ports ၂ ခုနှင့် 10GE optical ports၊ အသုံးပြုသူဘက်မှ - GEPON ports ၈ ခု။ (၃) EDFA ၏လုပ်ဆောင်ချက် - Plattable CATV EDFA module များကိုထောက်ပံ့ပေးပြီး output power ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ၄ ။
Carrier တန်းပုံးအမျိုးအစား EPON OLT ZC1600
နိဒါန်း ၁။ Caron Carrier အမျိုးအစား EPON OLT ပစ္စည်းကိရိယာများ ၂။ အသေးစားလက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ တပ်ဆင်မှုအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ၃။ PON ports ၁၆။ PON optical link protection၊ မလိုအပ်သော power module များဝိသေသလက္ခဏာများ ၁။ စံ - IEEE802.3- နှင့်ကိုက်ညီသည် 2008 စံ။ ၂။ စွမ်းရည် - ၁၆ ဆဆိပ်ကမ်းများ။ ၃။ Multi-ports - GE ports (လျှပ်စစ်နှင့် optic) နှင့် 10GE optical port များကို network ဘက်တွင်ပံ့ပိုးပါ။ 4. မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု: ပါဝါ module တွေမလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်မှု, ပန်ကာ module တွေ redundancy, PON optical link prote ...